UJardim uÁguas da Maiana - I-Airbnb
UJardim uÁguas da Maiana
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDolores
I-Chalet ijikelezwe yigadi enkulu enemijelo kunye nedama lamanzi entwasahlobo. Sinikezela ngemeko-bume eyamkelekileyo kumaqela kunye nabantu abafuna unxibelelwano olukhulu nendalo ukufumanisa ubugcisa bokuba yindalo. Relax kwaye ujabulele inkathalo kunye namava anikezelwa kwindawo kunye noluntu olujikelezileyo.
Ukutyelela kwiingxangxasi ezikufutshane ziyafumaneka, (Arcanjos) Amava okutya kwendalo, iYoga, iChikun. Unyango lwesandi kunye nomphefumlo kunye nokucamngca.
Iimitha ezingama-800 ukusuka kwi-chalet yiSolarion Park eneengelosi kunye neengxangxasi zeArchangels.
I-Povoado do Moinho yimvelaphi yobukoloniyali, i-quilonbola, ehlala ngokuhambelana kunye neentsalela ze-hippies ukusuka kwi-80s, i-Sanyasins esuka kwi-90 kunye nabantu abatsha abasandul 'ukuza befuna ukuhlala kwi-communion nendalo ...
Umbuki zindwendwe ngu- Dolores